Injifannoo Gooticha waraana Oromoo WBO !! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsInjifannoo Gooticha waraana Oromoo WBO !!
Injifannoo Gooticha waraana Oromoo WBO
“Amajjji 18/2019 VIVA WBOn zoonii kibbaa godina gujii naannoo#gubbaa #magaadaa jedhamutti RIB daaraa godhee jira”
#HIDHAA_QOFAA mitii TAANKIINIS haa duulan. FINFINNEF OROMIYAA irraayis luka tokkoo hin fuunu.
Biyyaaf biyyoo keenya irratti .
WBO kan LOLAANII jiru, ILMAAN DIINAA ,SABOOTA JIBBAA OROMOO qaban kaneen maqaa MISEENSOTA RAAYYAA ITTISA BIYYAA jechuun walitti qabamaniidha.
Kanneen immoo WBO haala fedheen keessumesuus danda’a.
TUQAAn WBO OROMOOTA HUNDA DHUKKUBSA.
Leencaa koo Dhiraa dhugaaf dhabatu Jaal #marroo Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zooni lixaa
“Hanga ammaatti waraana Bilisummaa Oromoo qabuuf meeshaa irraa hiikuu mitii, qalaa’aa WBO’n dhukaaseeyyuu lafaa hinkaafne”
“Akkuma budaa baaqelaa rasasaa gidduu naguma bahaa jirra!” Jedhan ajajaan WBO Zoonii dhihaa Jaal Marroon dhaamsa dabarsaniin.”Hanga ammaatti waraana Bilisummaa Oromoo qabuuf meeshaa irraa hiikuu mitii, qalaa’aa WBO’n dhukaaseeyyuu lafaa hinkaafne”
“Akkuma budaa baaqelaa rasasaa gidduu naguma bahaa jirra!” Jedhan ajajaan WBO Zoonii dhihaa Jaal Marroon dhaamsa dabarsaniin.
Qellem Wallaggaa Qabeenya Ummata WBO keessa jira jechuun Gubuu jiruu.
Dararaan Ummata Wallaggaati hammatera.
ODP araara Abboota gadaa gufachiisuuf Tattaaffii gocha jiruu.
Bu’aa QBO kaleessas kan dabarsee Tigireef /TPLF/ kenne Leencoo Lataati. Har’as wareegama ilmaan Oromoo maraan keessattuu Qeerroo Bilisummaa Oromoon argame kan Baandota Wayyaaneetti, OPDOtti dabarsee gurguraa jiru Leencoo Lataati.
Baroottan qabsoo darbe keessattuu bara Dargii dirqama Amaarticha Dr. Geetachoo Raddaa irraa /EPRP/ fudhachuun qabsaawonni jajjaboon akka Baaruu Tumsaa fi Badhoo Dachaasaa, caasaan ABO magaalaa keessaa cicciramee mana hidhaa Dargiitti miseensonni akka guuraman kan goosise Leencoo lataati.
Har’as qabsoo oromootiif gadi hin ciifne jaarsi kun. Haluu ba’uuf jecha OPDO/ODPtti hudduu gatatee kan uummata Oromoo ficcisiisaa jira isa. ABO diiguu fi WBO rukuchiisuu irratti gorsaa olaanaan Kol. Abiyyii fi Lammaa Magarsaa isa. Har’a waa’illaan akka Dr. Diimaa Noogoo, Kamaal Galchuu, Hailu Gonfaa fi fakkaattota qabatee Oromoo irratti kan duulchisuu fi Ethiopiyummaa ijaaruu ykn tiksuuf ga’ee guddaa xabachaa jiru isa.
Dhiigni ilmaan Oromoo kaleessa dhangala’aa turee fi har’a illee dhangalaa’a jiru isin haa gaafatu, addan Leencoo Lataa.
Oduu injifannoo WBO viva toltu baranumaa badduus alanumaa
Waraanni bilisummaa oromoo shaggar dhihaa keessa socho’u tarkaanfii of irraa ittisaa fudhateen gammoojii Gindabarat keessatti waraana diinaa isa adamsuuf deemte oraalii 2 hoggaa barbadeessu, waraana 300 keessaa hedduu ajjeesee 75 ol madoo taasise!
Akkasum kan shawwaa kaabaa Salaalee kuyyuu WBOn waraana diinaa isa adamsuuf baate 300 keessaa hedduu ajjeesee 91 ol madoo taasise.
Dabalataan meeshaa akka:-
1) Girnoovii ____________11
3) kilaashii _____________ 62
4)Rasaasa ______________4010 booji’uun dantaa qabsoo bilisummaa oromoof oolchee jira!
WBOn barabaraan haa jiraatu!
Tarkaanfii ofirraa Ittisuu WBO Salaalee fi Ginda_Baratiitti fudhateera
Injifanno Amajjii 17/2019
Ilma namaa xuxxuquutu badee,kanaaf Kilaashii barbaacha badee,
Na shoshookkisheekaa ,Zinnaarri mudhiikoo shoshookkisee kaa,Roorroo alagaatu na boochisekaa!!!…” Jedhu Warri #Salaalee gaafa
“Amajii 17 /2019
Gootichii waranaa bilisummaa oromoo WBOn zonii dhihaa guyyaa guyyaan hojii oromiyaa hundaa bonsuu hojjeecha jiraa
Gootichii waranaa bilisummaa oromoo WBOn zonii dhihaa Waranaa goleysituu wayyanee kan kittilaayoo isani OPDO of duraa buftee shawaa lixaa fi shawa kabaati waranaa goleysituu wayyanee daressee jiraa
Injifannoo ummataa oromoo Gadaan Gadaa bilisummaati qawween wayyanee bishaan bishaan habatuu Amiiiiin qawween WBO ibidaa manziila ha batuu Amiiiiin”